को बन्ला अबको राष्ट्रपति ? यी हुन् सम्भावित अनुहार - Khula Patra
को बन्ला अबको राष्ट्रपति ? यी हुन् सम्भावित अनुहार
प्रकाशित समय: १७:५८:५९
अहिलेकै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई निरन्तरता दिने सम्भावना पनि बलियाे
काठमाडौं । नयाँ संविधानअनुसार पहिलो पटक भएको आमनिर्वाचनको नतिजा आउने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै नयाँ सत्ता समीकरणको बहस सुरु भएको छ । खासगरी नयाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका विषयमा विभिन्न चर्चापरिचर्चा हुन थालेको हो ।
चुनावमा वामगठबन्धनले करिब दुई तिहाई सिट जित्ने पक्का भएसँगै वाम गठबन्धनकै सरकार बन्ने र उल्लेखित पदहरु पनि गठबन्धनकै नेताहरु पाउने निश्चित छ । तर, गठबन्धनबाट पनि कुन नेता कुन पदमा जाने भन्ने विषय खास चासोको हो । राष्ट्रपतिका लागि अहिले एमाले र माओवादीका खास केही नेताहरुको चर्चा शिखरमा छ ।
एमाले बरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल भावी राष्ट्रपतिका लागि चर्चामा छन् । तर, उनले सकेसम्म राष्ट्रपति पद नलिने सम्भावना छ । तर उनी राष्ट्रपति नभएर के हुने ? भन्ने अन्योल छ ।
एमालेका बरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नाम पनि भावी राष्ट्रपतिका लागि चर्चामा छ । र, उनी राष्ट्रपति पाए स्विकार्ने मनस्थितिमा भएको बुझिएको छ ।
बर्दियाबाट चुनाव हारेका एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको नाम पनि भावी राष्ट्रपतिको सूचीमा चर्चामा छ । संविधान अनुसार राष्ट्रपति बन्नका लागि संसद हुनुपर्देन ।
माओवादी केन्द्रका नेता अमिक शेरचनको पनि नाम राष्ट्रपतिका लागि चर्चामा छ । उनी अहिलेको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ लडेनन् । पुराना कम्युनिष्ट नेता शेरचनलाई माओवादीभित्र भावी राष्ट्रपतिका लागि एक दावेदार मानिएको छ ।
त्यस्तै, दलहरुले अहिलेकै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई निरन्तरता दिने सम्भावना पनि छ ।